Romelu Lukaku oo ogolaaday inuu ku biiro kooxda Inter Milan… (Imise lacag ah ayuu mushaar ahaan uga qaadan doontaa Isbuucii?) – Gool FM
(Manchester) 20 Juunyo 2019. Romelu Lukaku ayaa la soo warinayaa inuu ogolaaday heshiis uu ugu biirayo kooxda Inter Milan, kaasoo uu mushaar ahaan isbuucii uga qaadan doono 180,000 oo gini, haddii uu xagaagan u soo dhaqaaqo naadiga reer Talyaani.
Lukaku ayaa 15 gool u dhaliyey kooxda Manchester United xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, waxaana si weyn loola xiriirinayay inuu isaga dhaqaaqi doono kooxda uu hoggaamiyo macallin Ole Gunnar Solskjaer tan iyo dhammaadka xilli ciyaareedkii 2018-19.
Horraantii todobaadkan, waxa uu shaaca ka qaaday xiddiga xulka qaranka Belgium inuusan ku qasbi doonin kooxda Man United inuu ka tago xagaagan.
Yeelkeede, Wargeyska The Sun ayaa warinaya in Weeraryahankan dhexe uu ogolaaday heshiis uu todobaadkii ku qaadanayo 180,000 oo gini inuu ugu biiro kooxda Inter, waxaana uu haatan sugayaa kaliya inta kooxda ka dheesha horyaalka Serie A ay dalabkiisa u soo gudbinayso Red Devils.
Kooxda 20-ka goor ku guuleysatay horyaalka Ingiriiska ee Man United ayaa la rumeysan yahay inay 80 milyan oo gini ku doonayso Lukaku inay ku iibinayso xagaagan.
Si kastaba ha ahaatee, kooxda Tababare Antonio Conte ayaa waxaa waajib ku ah inay iska iibiyaan weeraryahankooda reer Argentina ee Mauro Icardi inta uusan bilaaban xilli ciyaareedka 2019-20, haddii ay doonayaan inay dhammaystiraan heshiiska Lukaku si ay uga fogaadaan inuu qabto xeerka dhaqaalo wanaaga ee Financial Fair Play.
RASMI: Kooxda Manchester City oo heshiis cusub ka saxiixatay mid ka mid ah xiddigaheeda